Silicones igosipụta ọtụtụ ihe bara uru e ji mara - China Jution Silicone & Rubber
Silicones igosipụta ọtụtụ ihe bara uru e ji mara
Silicones igosipụta ọtụtụ ihe bara uru e ji mara, gụnyere: 
Kwes kwụsie ike (mgbe niile nke Njirimara n'elu a obosara okpomọkụ nso nke -100 250 ° C).
The ike na-ichughachiazu mmiri na-etolite mmiri ghara ịba n'ime akàrà.
Anaghị arapara ọtụtụ substrates, ma-agbaso nnọọ nke ọma ka ndị ọzọ, eg iko.
Anaghị akwado microbiological ibu.
Iguzogide oxygen, ozone, na ultraviolet (UV) ìhè. Nke a onwunwe emewo ka nile iji silicones na-ewu ụlọ ọrụ (eg coatings, ọkụ nchedo, gbazere agbaze akàrà) na akpakanamde ụlọ ọrụ (mpụga gaskets, mpụga mkpụbelata).
Ọdụdọ mkpuchi Njirimara. N'ihi na silicone nwere ike chepụtara na-electrically insulative ma ọ bụ conductive, o kwesịrị ekwesị ka a dịgasị iche iche nke eletriki ngwa.
High gas permeability: na ụlọ okpomọkụ (25 ° C), na permeability nke silicone roba maka ndị dị otú ahụ, haruru ka oxygen bụ mkpokọta 400 ugboro [tikeeti mkpa] na nke butyl roba, na-eme silicone bara uru n'ihi na ọgwụ ngwa na nke ụba aeration a chọrọ. Ọzọ, silicone rubbers ike ga-eji ebe gas-uko akàrà dị mkpa.
Silicone nwere ike ghọọ roba sheeting, ebe ọ nwere ndị ọzọ na Njirimara, dị ka ịbụ FDA Dabara. Nke a gbatịrị ojiji nke silicone sheeting ka ọrụ na-achọ ịdị ọcha, n'ihi na ihe atụ, ihe oriri na onunu na-emepụta ọgwụ.
Silicones igosipụta ọtụtụ ihe bara uru characteris ...